GOOBAHA DAGAALKA: SHANTA Meelood Ee Laga Go'aaminayo Guusha Caawa, 10ka Ciyaartoy Ee Kulanka Iyo Xogta Xiddigaha Foodda Is Daraya - Page 2 of 3 - Gool24.Net
4. Serge Gnabry vs Juan Bernat
Serge Gnabry waxa uu wacdaro ka dhigayaa tartanka Champions League xili ciyaareedkan, isaga oo jabiyey rikoodho uu isagu hore u dhigtay. Xiddigan garabka ka ciyaara, waxa uu dhaxlay booskii uu Argen Robben uga ciyaari jiray Munich, waxaana sidii halyeygaas hore oo kale uu u dheelay kulankii Lyon oo uu xataa goolashiisii oo kale dhaliyey isaga oo adeegsanaya lugtiisa bidix.
25 jirkan reer France ayaanu shaki ku jirin inuu ka mid yahay xiddigihii ugu wanaagsanaa Champions League xili ciyaareedkan, waxaanu soo dhaliyey sagaal gool iyo laba kale oo uu caawiye ka noqday. Horyaalka Bundesliga ayuu sidoo kale ka dhaliyey 12 gool iyo 10 caawimood oo uu ku daray, waana waxqabad cajiib ah.
Waxay caawa si toos ah iskaga hor imanayaan Juan Bernat oo PSG uga ciyaara difaaca dhinaca, waxaana Gnabry laga sugayaa in sidii uu Lyon ku sameeyey oo kale uu haddana ku celiyo, si kooxdiisa uu uga caawiyo inay koobka qaataan.
Laakiin Juan Bernat ayaa isaguna ah xili ciyaareed wanaagsan soo muujiyey, waxaanu nafta u huri doonaa sidii uu u xakamayn lahaa xiddiga reer France si kooxdiisa aanay khatar uga gelin dhinaca uu isagu taagan yahay.
3. Robert Lewandowski vs Thiago Silva
Halkan ayuu dagaal weyni ka taagan yahay, waana mid ay cid waliba isha ku hayso, sababtoo ah, Robert Lewandowski way adag tahay inay cidi joojiso, waxaanu xili ciyaareedkan soo dhaliyey 15 gool oo tartanka Champions League ah 10kii ciyaarood ee ay kooxdiisu ciyaartay. Lewa, shaqsiyan waxa uu doonayaa inuu illaa laba gool dhaliyo caawa si uu usoo qabto rikoodhkii gool-dhalinta Cristiano Ronaldo ee halka xili ciyaareed ee kaliya oo ahaa 17 gool, balse waxa taas ka hor taagan Thiago Silva oo ah difaac khabiir ah oo marka ay ciyaartani dhamaato kaddib soo afjaraya waayihiisa PSG.
Robert Lewandowski oo kubaddiisu aanay kaliya ku koobnayn inuu dhaliyo, waxa uu sidoo kale ka shaqeeyaa dhismaha ciyaarta iyo caawinta sidii uu sameeyey labadii kulan ee ugu dambeeyey, waana ciyaartoy aan inta badan lumin fursadaha uu helo.
Thiago Silva ayaa sidaas oo kale aan hurdo seexan doonin, waxaanu daraasad iyo raadraac ku sameeyey qaab ciyaareedka Lewandowski isaga oo dhinac walba ka eegay farsamooyinka uu laacibkani isticmaalo.
Dagaalka ay caawa labadan xiddig isku haleelaan, waxay natiijadiisu noqon doontaa in midka lagu jabiyo, ay kooxdiisuna jabto oo koobka laga qaado.